आइएसले कोशी पुल भत्काउने खबर फैलाएर कोशी पुलमा भारतीय सेना तैनाथ गर्ने प्रपंच? ~ Khabardari.com
आइएसले कोशी पुल भत्काउने खबर फैलाएर कोशी पुलमा भारतीय सेना तैनाथ गर्ने प्रपंच?
२ दिन देखि भाइरल बनेको तलको खबर प्रायोजित् र नियिजीत् हिसाबमा ल्याएको देखिन्छ । पहिला बिमान अपहरण को नाटक गरेर बिमान स्थाप सम्म भारतीय मार्सल ल्याउने यस्तै डिजाइन भएको जानकारहरु बताउछन ।
यो तलको भ्रमपूर्ण समाचार अन्नपूर्ण बाट लिएको हो हेर्नुस आफै बुज्नुस
भारतले कोसी ब्यारेजको सुरक्षा गर्न आग्रह गरेपछी कोसी ब्यारेजको सप्तरी र सुनसरीको दुबै तर्फ सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् । आइएसले के कारणले कोशी ब्यारेजमा आक्रमण गर्न लागेको भन्ने विषयमा भारत पक्षले स्पष्ट रुपमा भने खुलाएको छैन् ।